အခ်စ္ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Archives - Latest Myanmar News
ချစ်သူရွေးကြတဲ့အခါ ဘယ်လို စံနှုန်းတွေနဲ့ ရွေးကြမှာလဲ။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ideal type တွေက မတူကြပေမယ့် အချစ်ရေး ကံကောင်းချင်ကြတာကတော့ လူတိုင်းပါ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ အချစ်ရေးမှာ လူရွေးမှားနေပြီဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) သင်လုပ်သမျှအရာရာကို အဆိုးဘက်က ဝေဖန်တတ်တယ် သင်ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစား ပုံစံကအစ၊ သင်ရွေးချယ်တဲ့ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်အလယ်၊ သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ဆိုင်တာတွေအဆုံး … သူ့အမြင်မှာ အပြစ်တင်စရာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အရာရာကို အဆိုးဘက်က ဝေဖန်နေတတ်တယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ လူရွေးမမှားဘူး ဆိုရင်တောင် မှန်တော့ မမှန်ပါဘူးလို့ ပြောရ မှာပါ။ (၂) စကားပြောမှားသွားမှာအမြဲစိုးရိမ်နေရတယ် တခါတရံ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပြောနေတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် တွေးမိတဲ့ အထိပါပဲ။ … Read more
ဒီအချက်တွေရှိနေရင် သူဟာ သင်လက်တွဲသင့်တဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး
January 18, 2021 by Latest Myanmar News
ဒီအချက်တွေရှိနေရင် သူဟာ သင်လက်တွဲသင့်တဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး ပရိသတ်ကြီးထဲမှာ ချစ်သူရှိတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ပါမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ညီမလေးတို့ကို သတိပေးချင်တာက အောက်ပါအချက်တွေအနက် တစ်ချက်ချက်ဖြစ်စေ၊ အချက်အားလုံးကို ဖြစ်စေ သင့်ချစ်သူရဲ့ လက်ရှိစရိုက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သူဟာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ သင့်လက်တွဲဖော် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောပါရစေ။ ဒီလိုမှ လမ်းမခွဲနိုင်ရင်လည်း တစ်သက်လုံး အချစ်ကျွန်ဘဝမှာ မရှုမလှနေရမှာလို့ သတိပေးပါရစေ ချစ်ညီမလေးတို့ရေ …။ (၁) ငိုအောင်လုပ်တယ်” သူဟာ သင့်ကို စနောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ တမင်သက်သက် စိတ်ခံစားရအောင်၊ စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်၊ သောကဖြစ်အောင်၊ စိတ်ဆင်းရဲအောင် တမင်ရည်ရွယ်ပြီး သင့်ကို မျက်ရည်ကျစေတယ်၊ သင့်ကို ရိုက်မောင်းပုတ်မောင်း လုပ်လို့ သင် မျက်ရည်ခဏခဏ ကျရတယ်ဆိုရင် သင်လက်ရှိ လက်တွဲနေတဲ့သူဟာ ဒေါသအာဃာတ ကြီးမားလွန်းသူ … Read more
Categories အခ်စ္ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Tags ယောကျ်ားတစ်ယောက်
January 5, 2021 by Latest Myanmar News
Categories အခ်စ္ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Tags လူရွေးမှား
မိမိချစ်သူ ခင်သူတွေနဲ့ ဘဝဆက်တိုင်း အတူတူဆုံလိုလျှင် .
December 27, 2020 by Latest Myanmar News
ဘဝဆက်တိုင်း အတူတူဆုံနိုင်မယ့် ကုသိုလ် .. ဘဝတိုင်း ဆုံချင်လျှင်အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ဘဂ္ဂတိုင်း သုသုမာရဂိရိမြို့တွင် သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် နကုလပိတာ နကုလမာတာ အမည်ရှိသော သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံအိမ်သို့ ကြွတော်မူသည်၊ သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံတို့သည် မြတ်စွာဘုရားအား ရိုသေစွာရှိခိုးလျက် သင့်လျော်သောနေရာ၌ ထိုင်နေကြပြီးလျှင် နကုလပိတာ သူကြွယ်က ဤသို့လျှောက်သည်- မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်သည် အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သော နကုလမာတာနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်၊ လက်ထပ်သည့်အချိန်ကစ၍ ယနေ့အထိ နကုလမာတာကို ကျော်လွန်ပြီး အခြားသော မိန်းမများထံ စိတ်ရောက်ဖူးသည်ဟု တခါမျှ မရှိခဲ့ဘူးပါ၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှုကား ဆိုဖွယ်ရာပင် မရှိတော့ပါ၊ မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်တို့သည် ယခုဘဝ၌လည်း အချင်းချင်းတွေ့ဆုံပြီး နောင်ဘဝသံသရာ၌လည်း အချင်းချင်းတွေ့ဆုံရန် အလိုရှိကြပါသည်ဘုရား။ နကုလမာတာကလည်း လျှောက်ပြန်သည်-မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်မ ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် … Read more
Categories တရားႏွင္႔ ဂါထာေတာ္မ်ား, အခ်စ္ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Tags ဘဝဆက်တိုင်
December 23, 2020 by Latest Myanmar News
Categories အခ်စ္ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Tags အရမ်း လွမ်းနေတဲ့
မိန်းကလေးတွေသိထားသင့်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ ယောင်္ကျား ၄ မျိုး
December 6, 2020 by Latest Myanmar News
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ ယောင်္ကျား ၄ မျိုး ၁။ သစ္စာမရှိတဲ့ သူမျိုး သစ္စာမရှိတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကို လက်မထပ်မိအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ သစ္စာမရှိတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးက သင့်ဘဝကို ဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်သလို သင့်ကိုလည်း တစ်သက်လုံး စိတ်းဒုက္ခရောက်စေပါလိမ့်မယ်။ ၂။ ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ ယောင်္ကျား တစ်စုံတစ်ခုကို ဖုံးကွယ်တတ်ပြီး ဟန်ဆောင်ကောင်းလွန်းတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးတွေကို သတိထားပါ။ သင့် မသိအောင် အမှားတွေ လုပ်ထားပြီး ဟန်ဆောင်ကောင်းစွာ သင့် အနားမှာ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ၃။ အရက်သေစာနဲ့ မူးယစ်တွေကို စွဲလန်းနေသူ အရက်သေစာနဲ့ မူးယစ်တွေကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စွဲလန်းနေတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကို ဝေးဝေးကနေ ရှောင်ပါ။ သူတို့ဟာ သင့် ထက်ပိုပြီး ထိုအရာတွေကို နှစ်သက်တဲ့ အတွက် စိတ်ဆင်းရဲ ရနိုင်ပါတယ်။ … Read more
Categories အခ်စ္ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Tags မိန်းကလေ
အတွင်းစိတ်ပုတ်သူတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာရပ်များ
November 30, 2020 by Latest Myanmar News
လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထားကို ကြည့်ရုံနဲ့ မသိနိုင်ပါဘူး။ အပြင်မှာ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံနေတဲ့ ပုံစံကို ကြည့်ပြီး အတွင်းစိတ်ကို သိအောင် လုပ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အတွင်းစိတ် ပုတ်ပြီး စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူပုံစံမျိုး ဟန်ဆောင်ထားတတ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ အတွင်းစိတ်ပုတ်နေတဲ့သူ ဟုတ်၊ မဟုတ်ကို ခွဲခြားလို့ ရတဲ့ အချက်လေးတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါတွေကတော့ အခုလိုပါနော်…။ (၁) ပူလောင်တတ်တယ် အတွင်းစိတ် ပုတ်တဲ့သူတွေမှာ ရှိနေတဲ့ အချက်က ပူလောင်မှုပါပဲ။ သူတို့တွေက တခြားသူတွေ သူတို့ထက်သာတာမျိုးကို သဘောမကျသလို တခြားသူတွေကို အကောင်းမြင်ပေးတာမျိုးလည်း မလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ ဒီအတွက် သူတို့ဆီမှာ တခြားသူတွေကို မကျေနပ်တဲ့ အကြောင်းမျိုးတွေ ကြားရတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့ မကျေမနပ် ပူလောင်မှုကိုလည်း တခြားသူတွေကို အထင်သေးတဲ့ … Read more
Categories အခ်စ္ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Tags အတွင်းစိတ်ပုတ်
November 25, 2020 by Latest Myanmar News
လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီး ကျိန်းသေ ဖြစ်လာမယ့်သူတွေမှာသာ မြင်တွေ့ရမယ့် စရိုက်လက္ခဏာများ အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးဆိုတာ လွယ်လွယ်လေး ဖြစ်သွားကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့တွေမှာ တခြားသူတွေထက် ထူးခြားနေတတ်တဲ့ အရာတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကပဲ သူတို့ကို လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးတွေ ဖြစ်သွားစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီး ဖြစ်လာမယ့် သူတွေမှာ ဒီလို အချက်တွေ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ၁။ ဇီဇာကြောင်တယ် ဒါကတော့ အဓိက အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဇာကြောင်တတ်တဲ့ အကျင့်ကတော့ တနည်းနည်းနဲ့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းမှုအပိုင်းမှာ ဇီဇာကြောင်တာ၊ လူတွေနဲ့ ဆုံရင် ဇီဇာကြောင်တာ၊ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သတ်ရင် ဇီဇာကြောင်တာ စသဖြင့် တစ်ခုခုမှာ ပုံမှန်ထက် လွန်လွန်ကဲကဲ ဇီဇာကြောင်လွန်းတာက လူပျိုကြီး၊ … Read more
Categories အခ်စ္ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Tags အပျိုကြီး
မိန်းကလေးတိုင်းကတော့ ဇနီးမယားကောင်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လူအားလုံးက ပြည့်စုံနေတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ဇနီးမယားကောင်း ပီသတဲ့ သူတွေလည်း ရှိလို့ နေပါတယ်။ ဇနီးမယားကောင်း ပီသသူတွေက အိမ်ထောင်ရေးကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ထိန်းညှိတတ်သလို အိမ်ထောင်ဖက်ကိုလည်း အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်နိုင်တတ်ကြပါတယ်။ ဇနီးမယားကောင်း ပီသတဲ့သူတွေမှာ ဒီလို အချက်တွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ (၁) နားလည်မှု ပေးနိုင်တယ် သဝန်တိုပြီး နားလည်မှု မရှိ ချုပ်ချယ်နေတတ်ရင် အိမ်ထောင်ရေး တစ်ခု၊ ဆက်ဆံရေး တစ်ခုက မတည်မြဲနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်ကို ဇနီးမယားကောင်း ပီသသူတွေက ကောင်းကောင်း နားလည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်လက်တွဲဖော်က ယုံကြည်မှု ရှိပြီး စိတ်ချမ်းသာစေဖို့အတွက် ကိုယ့်ဘက်ကနေ ယုံကြည် နားလည်မှု ပေးထားတတ်ကြပါတယ်။ (၂) သူ့အတွက် ပံ့ပိုးနိုင်တယ် မောင်တစ်ထမ်း … Read more
Categories အခ်စ္ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Tags ဇနီးကောင်း
ဘယ္သူ ကမွ ကိုယ့္ ကို စေခၚဖို႔ သတိမရၾကဘူး ကၽြန္မ မာနေလးနဲနဲထားၿပီး မေခၚမေျပာပဲေနၾကည့္လိုက္တာ သူစိမ္းေတြ ျဖစ္လာတာပဲ အဖတ္တင္တယ္ ကိုယ့္ကို ေခၚရေကာင္းမွန္း…. ဘယ္သူမွ သတိမရၾကဘူး ဒီဆက္ဆံေရးေတြက ကၽြန္မ ဘက္ကစေခၚမွ ျဖစ္မွာလား တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္မကေကာ သတိရခ်င္စရာ မေကာင္းခဲ့လို႔မ်ားလား အေပၚယံလဲ မေပါင္းတတ္ခဲ့သလို ေပါင္းလဲ မေပါင္းဖူးခဲ့ပါဘူး စစ္မွန္တာေတြပဲ ကိုယ့္ဘက္ကေပးခဲ့တာပါ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ ကံေပါ့ . . . မမွားပဲနဲ႔လဲ ေတာင္းပန္ခဲ့ဘူးသလို မွန္ေနရဲ့နဲ႔လဲ ႏွုတ္ဆိတ္ေနခဲ့ဖူးတယ္ ကၽြန္မ မာနေတြထက္ ခင္မင္မွုဆိုတာေလးကို ပိုၿပီး တန္ဖိုးထားခဲ့မိလို႔ပါ လိုတဲ့အခါမွသာ တၿပီး မလိုတဲ့အခါ ကၽြန္မကို ေမ့ထားတတ္တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြ တေျဖးေျဖး စိတ္ကုန္လာခဲ့ပါၿပီ . . … Read more